Decor Ntinye Ntinye - Imewe Mmewe
Ntinye Ntinye N’ime ihe nlere anya achoro m inye echiche banyere ihe bu eziokwu, ka anyi tulee nke anyi ma lee ya anya dika ihe onyonyo n’ile anya. Ihe ngosi site na okike site n'oge ruo n'oge na-emebi emebi. Ihe dị n’azụ ya ma ọ bụ ihe ga - eme mgbe ịkpụzi ihe ndozi enweghị ike ịbụ apocalyps na - abịanụ kama ọ bụ imepụta usoro ọhụrụ. Foto ọzọ banyere ihe nwere ike ime ma ihe nkiri ahụ agwụ.
Aha oru ngo : Decor, Aha ndị na-emepụta ya : Johanna Mårtensson, Aha onye ahịa : Johanna Mårtensson.
Ntinye Ntinye Johanna Mårtensson Decor